Fadlan Lacagta Noo Kordhi Aanu Saxiixyo Samaynee- Maamulayaasha Arsenal Oo Mulkiilahooda Stan Kroenke Ka Baryay In Uu Lacagta U Kordhiyo. - Gool24.Net
Fadlan Lacagta Noo Kordhi Aanu Saxiixyo Samaynee- Maamulayaasha Arsenal Oo Mulkiilahooda Stan Kroenke Ka Baryay In Uu Lacagta U Kordhiyo.
Kooxda Arsenal ayaa ku dhibtoonaysa sidii ay saamayn ugu yeelan lahayd suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, waxaana soo baxay war sheegaya in maamulayaasha kooxda Gunners ay mulkiilahooda Stan Kroenke ka barayaan in uu u kordhiyo lacagta ay suuqa ku galayaan.
Kadib markii ay Arsenal u soo bixi wayday UEFA Champions league waxaa hoos u dhacay lacagta ay suuqa u diyaarsanayeen iyada oo la xaqiijiyay in ay 45 milyan gini kaliya hadda suuqa ugu talo galeen.
Arsenal ayaa dalab 40 milyan gini ah ka gudbisay xidiga kooxda Crystal Palace ee Wilfried Zaha laakiin lacagta ayaa ah kala badhka ay kooxda Crystal Palace ku qiimaynayso xidiga reer Ivory Coasta waxayna markiiba soo diideen dalabka Gunners.
Gudoomiyaha kooxda Crystal Palace ee Steve Parish ayaa Zaha u sheegay in aanu riyadiisa ka hor joogsan doonin in uu kooxda ka baxo balse waxa uu marka hore doonayaa in uu helo dalab u qalma qiimaha uu suuqa ka joogo.
Crystal Palace ayaa 50 milyan gini dhawaan Man United kaga iibisay difaaca midig ee Aaron Wan-Bissaka mana jirto baahi ay waqti xaadirkan u qabaan in ay dalabka Arsenal ee 40 milyan gini ah ku aqbalaan sidii uu Zaha u bixi lahaa waxayna ku qiimaynayaan 80 milyan gini.
Wargayska Daily Mail ayaa sheegay in madaxda kooxda Arsenal ay mulkiilaha kooxdooda Stan Kroenke ka baryayaan in uu lacagta suuqa u kor u qaado si ay saxiixyo u samayn karaan.
Maamulka Gunners ayaa arkaya Tottenham oo rekoodhkii suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxdeeda jibisay iyada oo 65 milyan gini hal ciyaartoy kula soo wareegtay, waxa kale oo ay arkayaan Man City oo ciyaartoyda ugu fiican haysata oo haddana 70 milyan ku kharash garaysay Rodrigo Hernandez.
Waxayna Stan Kroenke ka codsadeen in uu sare u qaado lacagta uu suuqa kala iibsiga u qorsheeyay si ay u dhamaystiri karaan heshiisyada Wilfried Zaha iyo xidigaha kale ee ay doonayaan.
Arsenal ayaa sidoo kale laga soo diiday dalabyo dhawr ah oo ay ka gudbiyeen difaaca kooxda Celtic ee Kieran Tierney waxayna sidoo kale doonayaan xidiga kooxda Sampdoria eeJoachim Andersen.
Laakiin madaxda kooxda Arsenal ayaa aaminsan in ayna saxiixyadan samayn karin ilaa inta uu mulkiile Stan Kroenke sare u qaadayo lacagta uu suuqa kala iibsiga u diyaariyay.
Unai Emery ayaa hore loogu sheegay in uu iibiyo qaar ka mid ah ciyaartoyda uu Emirates Stadium ku haysto si uu lacag uga sameeyo laakiin ilaa hadda ma jiraan dalabyo lagu doonayo ciyaartoyda ay ka midka yihiin Mesut Ozil iyo Mustafi oo ka mid ahaa kuwa lacagta laga doonayay.
Si kastaba ha ahaatee, madaxda Gunners ayaa mulkiilahooda ka baryaya in uu siiyo lacagta ay suuqa ku galaan si ay kooxaha Premier league ula tartami karaan.